Famolavolana ny fananana ao Dubai | Dubai Real Estate avy amin'ny Provident
Dubai Marina dia iray amin'ireo tetikasa goavana indrindra ao Dubai izay nanehoan'ny manampahefana ihany koa ny fahalianany amin'ny fankatoavana ireo mari-pamantarana isan-karazany ary nanamafy ny lafiny ara-dalàna rehetra. Ny Marina velona amin'izao fotoana izao angamba no iray amin'ireo fomba fiainana malaza indrindra sy tena tiany eto amin'ny planeta. Afaka mankafy izany ianao amin'ny [...]
Ny Acacia Avenues, fiaraha-monina tokana miavosa izay miely mihoatra ny 94,000 metatra toradro, dia natsangana ary novolavolain'ny Kuwait miorina amin'ny Abyaar Real Estate. Ny sehatra velona dia manome sehatra tsy miankina toy ny any ivelany sy trano fonenana eny an-dranomasina koa mizara ny faritra misy azy miaraka amin'i Madinat Jumeriah sy ny lapan'ny fahavaratra. Heverina ho iray amin'ny [...]
Tendrombohitra amam-boninahitra sy ahi-maitso no mamihina anao amin'ny sokatra mivelatra amin'ny AKOYA Oxygen. Ity & rsquo; ity fiaraha-monina vaovao mahafinaritra ao Dubai ity izay ahitana trano maizimaizina manodidina ny zava-drehetra maitso maitso. Vetivety monja ny 15 miala ny tanàna, AKOYA Oxygen dia akaiky ny fon'ny natiora araka izay azonao atao. & Nbsp; AKOYA Oxygen dia manome tranokala [...]
Al Barari adiresy vaovao ho an'ny fitiavana. Ny fahitana sy ny nofinofin'ny lehilahy iray dia tonga tamin'ny endrik'ireo trano sy trano tsara tarehy. Io no fampiroboroboana ny famolavolana ny fianakavian'i Zaal eo ambany fitarihan'ilay mpandraharaha Emirate malaza Zaal Mohammad ary voasoratra eo ambanin'ny fananana avy amin'ny Provident Estate Al Barari [...]
Al Barsha dia iray amin'ireo vondrom-piarahamonina mitoka-monina vao haingana ary navoaka vao haingana tao Dubai Real Estate. Ny vondrom-piarahamonina dia ankasitrahan'ny mponina ao an-toerana sy ny fikambanana. Ny faritra manontolo voarakotry ny fiarahamonina dia manodidina ny 38 km kilaometatra. Afaka mahita ny tsy fisian'ny vahiny ao amin'ilay faritra [...]
Al Furjan dia tohanan'ny fehezan-teny malaza avy ao Dubai & rsquo; mialoha ny aviavim-pireharehana ary mamaritra ny famoriam-bahoaka ankehitriny misy vondrom-piainana mahafinaritra izay mankalaza ny fianakaviana, ny trano sy ny safidy. Fianakaviana mivelona amin'ny fianakaviana izay ahitana tanàna efatra lehibe izay miparitaka amin'ny hôtely 560 izay miorina akaiky amin'ny Zaridaina Discovery. Ny fampandrosoana [...]
Al Karama na rehefa voatanisa amin'ny teny tsotra dia Karama midika hoe Ny Fahamendrehana amin'ny teny Arabo dia distrika distrika ao Dubai izay eo akaikin'ny Dubai Creek ary koa ampahany amin'ny faritra lehibe indrindra ao an-tanàna. Mahagaga fa noho ny tsy fahamendrehany ny fananganana trano avo ambany. Na al Karama [...]
Al Khawaneej koa dia toerana misy an'i Dubai, izay mizara ho fizarana roa samihafa, anisan'izany toeram-pambolena sy toeram-ponenana. Ireto manaraka ireto: Al Khawaneej 1 sy Al khawaneej 2. Io no hany faritra ao amin'ny Emirate of Dubai izay manodidina ny 100 isan-jaton'ny firenena ao an-toerana monina any amin'ny faritra roa. Izany [...]
Al Muhaisnah dia toerana iray ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra (UAE). Any amin'ny faritra atsinanan'i Dubai any Deira, ny Muhaisnah dia ahitana vondrom-piarahamonina efatra: & bull; Madinat Al Muhaisnah (na Muhaisnah 1) & ombilahy; Al Muhaisnah 2 & bull; Al Muhaisnah 3 & bull; Al Muhaisnah 4 Madinat Al Muhaisnah sy Muhaisnah 2 dia voafehy any andrefana amin'ny làlana E 311 [...]
Al Nahda dia toerana iray any Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Eo amin'ny ilany atsinanan'i Dubai any Deira izy io. Al Nahda dia namorona ampahany amin'ny morontsirak'i Dubai & rsquo; s atsinanan'ny emiraatan'i Sharjah. Ny ampahany sasany amin'ny fiarahamonina dia mivezivezy ao amin'ny emirate ao Sharjah ary dia tonga eo ambanin'ny [...]
Al Quoz dia toerana iray ao Dubai; Eo amin'ny ilany andrefan'ny tanàna izy io. Any Avaratra dia sisin-tany Al Wasl sy any andrefana no misy an'i Umm Al Sheif, Al Manara sy Al Safa. Al Quoz dia ahitana vondro-trano avo lenta any avaratra atsinanana sy indostrialy sasany [...]
Al Quoz 3 dia iray amin'ireo vondrom-piarahamonina efatra ao Al Quoz amin'ny ankapobeny. Ny telo amin'izy ireo dia trano fonenana ary feno fianakaviana Emirati. Izy io koa dia eo akaikin'olona & nbsp; akaikikaiky ny sasany amin'ireo toerana malaza any Dubai, toy ny Safa Park sy Business Bay. Al Quoz koa dia misy efatra [...]
Al Quasis dia fikambanana lehibe ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Sehatra iray mitatao mankany amin'ny tendrony avaratra atsinanan'i Dubai City manakaiky ny emirate any Sharjah ary koa toerana tahaka an'i Hor Al Anz sy Al Twar. Toeram-ponenana malaza ao Dubai izay ao amin'ny faritr'i Deira [...]
Ny Villages Al Reem & rsquo; dia manentana ny aingam-panahy avy amin'ny architecture Arabo sy Espaniola nentim-paharazana ary ahitana karazany roa, trano roa tokana, tokantrano mitokana amin'ny haben'ny 1,690 ka hatramin'ny 3,060 sq ft, misy efitra telo, efatra ary dimy. Ny villas, izay napetraka tamina tranom-ponenana feno filaminana ary natokana ho amin'ny fenitra avo lenta, dia manome toerana malalaka, anisan'izany ny balcony, [...]
Al Satwa dia vondrom-piarahamonina kely novokarina tao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Izy io dia ahitana toeram-pamokarana avo lenta sy trano fonenana tsy miankina. Miorina eo amin'ny sisiny atsimo andrefan'i Bur Dubai ary mifanakaiky amin'ny lalana Sheikh Zayed. Tany am-boalohany, ireo mponina ao Al Satwa dia feno ny foko Bloushi indrindra [...]
Al Sufouh dia faritra tsy miankina ao Dubai. Eo amin'ny ilany andrefan'ny tanàna no misy azy ary ahitana ny fampandrosoana ny trano sy trano maro koa dia trano fonenana maimaimpoana maimaim-poana toy ny Dubai Knowledge Park sy ny tranokalan'ny Internet ao Dubai. Al Sufouh dia ahitana trano fonenana mahaleotena sy trano fisakafoanana ary io [...]
Al Warqaa koa dia toerana iray ao Dubai ary mizara ho vondrona 5 vondron'ny Al Warqaa 1, Al Warqaa 2, Al Warqaa 3, Al Warqaa 4, ary Al Warqaa 5. Izy io dia miorina indrindra any atsimo atsinanan'i Dubai Creek, sisin-tany avaratr'i Mirdiff, any Andrefan'i Nad Al Hammer, ary [...]
Ny Ranches Arabo, & nbsp; fiarahamonina manokana sy mahafinaritra any Dubai, dia miorina eo afovoan-tanàna. Izy io dia mandrakotra faritra manodidina ny 1652 acre ary manana tarehimarika manan-danja maro izay ahitana trano lavalava lehibe, tranobe trano sy trano tokana. Izy io dia manolotra trano malalaka isan-karazany avy amin'ny trano roa na enina enina sy trano fisakafoana. [...]
Ranches Arabo II
Amin'ny maha-mponina ao amin'ny Ranches Arabo dia hanana be dia be ny hiandrandra anao indray mandeha ao an-trano. Ny zavatra rehetra ilain'ny fianakavianao dia eo an-tokotaninao - fidio avy ao amin'ny The Arabian Ranches Golf Club eo akaikin'ny farihy na ny Angsana Spa ao amin'ny The Montgomerie Adiresy izay ahafahanao mamboly rehefa misy [...]
Arjan dia dolara iray tapitrisa dolara amin'ny tetikasa fandrindrana fiaraha-monina mifangaro amin'ny fiaraha-monina mipetraka ao amin'ny tany Dubai. Izy io dia ahitana tilikambo ara-barotra, trano fonenana, fivarotana varotra ary fampiantranoana izay hiparitaka manerana ny faritra 10 miaraka amin'ny tontolon'ny 157. Hisy ihany koa ny fampisehoana ny onjam-peo am-baravarankely, fialam-boly miavaka sy lehibe [...]
Ny tanànan'i Awali dia tetikasam-panorenana iray mahafaoka faritra manodidina ny 10 metatra toradroa 33.5. Eo amin'ny làlana Emirates, Ajman UAE. Fomba amam-panao am-pahamendrehana moderina sy ara-tsosin'ny Awali Co, iray amin'ireo mpandrindra ny tanànan'i Ajman. Eo afovoan'ny fandrosoana maoderina [...]
Ny Nosy Bluewaters dia toeram-pisakafoanana miaraka amin'ny toe-tsain'ny mpisava lalana, ny fampidirana ny nosy, ny renirano miaina miaraka amin'ny fahasahiranan'ny tanàna mba hamoronana traikefa tsy misy fialantsiny ho an'ny mponina sy ny mpitsidika. Izy io dia mofomamy manintona mampiroborobo ny tontolo ambanivohitr'i Dubais, izay mitarika ireo izay mitady fomba fiaina tsy misy fiafarana. Eo amoron-dranomasin'i Jumeirah Beach Resindence manoloana ny BEACH, [...]
Bur Dubai dia distrika manan-tantara ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Eo amin'ny ilany andrefan'i Dubai Creek izy io. Ny anaran-toerana dia literatiora nadika ho an'ny Mainland Dubai, satria io no manondro ny fisarahana amin'ny fomba nentim-paharazana ny faritra Bur Dubai miaraka amin'ireo faritra teknolojika maoderina toy ny [...]
Business Bay dia fantatra amin'ny anarana hoe Hub of Dubai ary dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanaovana ny Emira Arabo Mitambatra ho sehatra ara-barotra lehibe sy ara-barotra. Izy io dia manome ny tontolo tsara indrindra ho an'ny orinasam-pandraharahana ho an'ny tsirairay eo an-toerana ary koa orinasa iraisam-pirenena. Manana toeran'ny 240 trano misy [...]
Tanànan'i Arabie dia toerana mahavariana antsinjarany, trano, fialam-boly ary fialamboly hita any amin'ny vavahady mankany DUBAILAND. Miaraka amin'ny fandraharahana, ny birao, ny sekoly ary ny tobim-pahasalamana, izay miala sasatra kely ao an-toerana ary tohanan'ny trano fonenana mahazatra, trano fivarotana, trano fisakafoanana, trano fisakafoanana ary café dia mametraka ny tanànan'i Arabia ho toerana manan-danja ary iray amin'ireo [...]
Ny Tanànan'ny Kolontsaina dia tetikasam-pampandrosoana marobe an'ny Dubai UAE. Izy io dia natao ho toerana tsara indrindra eran'izao tontolo izao izay manome fahafinaretana ny fahafinaretana sy ny fialambolahy manerantany amin'ny alàlan'ny toetr'andro mamirapiratra sy marefo. Eo amin'ny sisin'ny morontsirak'i Dubai Creek izy io. Ny Village Cultural Dubai dia singa iray [...]
Dubai dia nomena ny tanànan'ny fandrosoana, izay tany efitra sy fasika izay taona vitsivitsy lasa izay ary mandrakotra ny tanàn-dehibe mibaribary amin'ny ala maitso. Ny fiovana haingana dia mitaky ny fivoarana sy ny mpanorina ny tanàna ary manerana izao tontolo izao dia miaiky ny fahasamihafana amin'ny ho avy ao Dubai. Misy zavatra goavana [...]
Deira dia iray amin'ireo distrika lehibe indrindra ao Dubai izay sisintanin'ny Golfa Persiana, Sharjah ary Dubai Creek. Ny distrika dia nalaza ho toy ny toekarena ara-barotra sy ara-bola ao an-tanàna, saingy taty aoriana ny fampandrosoana faritra hafa ao Dubai toy ny Bur Dubai, E 11 road etc io karazana fahaverezan'ny [...]
Ny Dubai International Financial Center (DIFC) dia sehatra ara-bola malalaka ao am-pon'ireo orinasan-trano ao Dubai miasa any amin'ny faritra toy ny banky, fampiasam-bola, fitantanana ary ny ara-bola Islamika. Ny DIFC dia heverina ho tsara indrindra raha ampitahaina amin'ny foibe ara-toekarena any London sy Singapore. Ny fampandrosoana koa dia ahitana trano trano izay manome ny manodidina eo akaikin'ny olona miasa [...]
Discover Gardens dia miaiky fa ny fialam-boly no lafiny manan-danja amin'ny fiainana tonga lafatra ka manome trano tsara tarehy izay manome trano tsara tarehy sy zaridaina tsara tarehy, fa mitondra ihany koa ny tontolo tery maitso, tontolo iainana miavaka, toerana malalaka izay azon'ny mponina ary amin'ny alalan'izany Ny fahasamihafan'ny zavatra ilain'ny mponina dia afaka [...]
Ny tanàna afovoan'i Dubai dia lazaina fa toerana mahafinaritra sy mahavariana mba hiasa na hivelatra. Fampiroboroboana manerantany izay nahatonga an'i Dubai & rsquo; toerana teo an-tampon'ilay mpilalao manerantany ao amin'ny faritra fanorenana sy ny fomba fiainana manokana. Heverina ho anisan'ny tetikasa lehibe indrindra amin'ny [...]
Any amin'ny faritra afovoan'i Downtown Jebel Ali no tena ilàna ny fandanjalanjana - eo amin'ny asa sy fialam-boly, fianakaviana ary namana, mahafantatra sy vaovao. Izany no mahatonga ny Downtown Jebel Ali manolotra karazam-pandrefesana toy ny tanàna sy traikefa an-tanan-dehibe. Avy amin'ny fiakarana avo goavam-be mankany an-dalamby mankany amin'ny trano fisakafoanana, avy eny an-tanan-dehibe mankany amin'ny manodidina. [...]
Dubai dia tanàna ao Emirà Arabo Mitambatra, ao amin'ny emirate. Ny emirate any Dubai dia hita any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Golfa Persiana ary iray amin'ireo emirate fito izay mamorona ny firenena. Izy io dia manana mponina betsaka indrindra ao UAE (2,106,177) sy faritanin'ny faritaniny faran'izay lehibe indrindra [...]
Ny Dubai Design District dia tetikasa famolavolana tetikasa vao haingana hatramin'ny 2013, izay sehatra II amin'ny tobim-pandraharahana ara-barotra eo an-tanàna, Business Bay. Izy io dia miorina amin'ny alàlan'ny Al Khail Road ary mifanohitra amin'ny farany. Hatramin'izao, efa misy manodidina ny trano fandefasana 10 mbola misy [...]
Ny Festival Festival tao Dubai no iray amin'ny fampiroboroboana ny trano, fivarotana sy fialamboly lehibe ao an-tanànan'i Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Voalaza fa tanàna ao an-tanàn-dehibe izy io. Ny fampandrosoana no singa lehibe indrindra any Moyen Orient momba ny singa rehetra ho an'ny asa, fiainana ary fialam-boly. Ny Festival Festival dia hametraka andianà vondrom-piarahamonina vohitra, [...]
Ny Dubai Healthcare City dia natomboka tamin'ny taona 2002 miaraka amin'ny tanjona tokana hametrahana ny fangatahana ho an'ny kalitao avo lenta, fitsaboana amin'ny marary. Androany dia faritra iray ho an'ny toeram-pitsaboana lehibe roa miaraka amin'ny tobim-pitsaboana 120 misahana ny fitsaboana sy laboratoara ho an'ny toeram-pitsaboana ary momba ny 3700 nahazoan-dàlana nahazo mpizara ho an'ny 4.1 tapitrisa metatra toradroa [...]
Dubai Hills Estate dia fampiroboroboana fampiasa mampiavaka izay mampiavaka ny tanànan'i Mohammed Bin Rashid. Izy io dia mampiseho ny fahatsarany ny fahitana ny fahitana an'i Dubai ho lasa tanàna manan-danja, anisan'ireo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao mba hiaina, hiasa sy hivoatra. Miorina mafy amin'ny maha-olom-pirenena azy manokana, miaraka amin'i Merasa sy Emaar [...]
Dubai Industrial City no tanàn-dehibe manerantany ao Dubai izay mandrakotra faritra manodidina ny 10 metatra toradroa eo ho eo. Hanjary ho tanàna ao anatin'ny tanàna iray izy ary ho toerana goavana ho an'ny orinasa mpamokatra any UAE. Manomboka amin'ny fambolena indostrialy kely sy ambany indrindra, ny Industrial Industrial City dia manolo-tena hanohana ny [...]
Dubai Investment Park dia fampiroboroboana fampiasa miavaka any Dubai, UAE. Io no iray amin'ireo toerana manan-danja amin'ny farany. Manana mombamomba azy izy ary nahavita ny fampivoarana ny tontolo iainana. Io dia noforonina sy voatendry ho toy ny tena samirery ampiasain'ny orinasa indostrialy, komity sy toeram-ponenana miaraka amin'ny sehatra maro samihafa sy singa manokana. [...]
Dubai Lagoon dia fampiroboroboana ny trano fonenana ahitana trano fonenana voalohany ary ao amin'ny Dubai Investment Park. Nomanina manodidina ny lagripidran'ny safira iray izay mampivelatra ny traikefa iainan'ny mponina izay mamela azy io ho lasa toerana tonga lafatra ho an'ny fianakaviana hiaina ao. Ankoatr'izany dia misy toerana lehibe ao [...]
Hatramin'ny niorenan'ny 2001 Media City Dubai ho iray amin'ireo vondrom-piarahamonina mavitrika manerantany izay manohana ny orinasan-tserasera maneran-tany sy ny orinasam-paritra. Manolotra tambajotra amin'ny orinasam-pampahalalam-baovao mahaleo tena izy ireo ary manana tontolom-barotra ho an'ny orinasam-pandraharahana izay nahatonga azy ireo hiasa amin'ny fiaraha-miombon'antoka iombonana sy ny fahalalahana eo anelanelan'izy ireo [
Dubai Pearl dia tranobe 73 ety sy 984 avo malalaka napetraka eo amin'ny al Sufouh Road any Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Izy io dia ahitana tilikambo fito, tranoben'ny trano fonenana, tilikambo fonenana, hotely kintana dimy ary zana-paritra ary fialamboly. Ireo tilikambo dia hifamatotra eo amin'ny fotony sy ny tetezana an-tampon'ny lanitra. [...]
Dubai Silicon Oasis dia ahitana tilikambo maoderina, R & D sy indostria, toeram-pampianarana, trano fonenana sy trano fonenana, trano fandraisam-bahiny ary toeram-pitsaboana, fitsaboana sy trano fonenana maro. Dubai Silicon Oasis dia manome tontolo iainana mahavelona ho an'ny ara-barotra sy ara-tsosialy. Antsoina hoe tanàna ao an-tanàna izany. Dubai Silicon Oasis [...]
Dubai Atsimo (fantatry ny daholobe ho Dubai World Central) dia ampahany amin'ny fandrindrana sy ny fampiasam-bola amin'ny fitoviana ary ny fitomboan'ny governemanta Dubai, izay miorina mafy eo amin'ny 140 kilometatra kilaometatra amin'ny faritra atsimon'ny Emirat akaikin'ny Jbel Ali Port. Ity hetsika ity dia nanatsara sy nanamafy ny toerana misy azy [...]
Dubai Sports City dia toerana misy toe-tsaina mafana sy fientanam-po, fombafomba tsy misy antra ary maherifo maoderina. Toerana misy ny fanatanjahantena ny fiainana, ny mpilalao velona ary ny angano. Niparitaka tamin'ny toerana 50 tapitrisa metatra toradroa, akademia, tokantrano manokana sy tokana, hetsika ara-kolotsaina ary fahafaha-manao varotra. Dubai Sports City dia iray amin'ireo [...]
Dubai Studios City dia ny fametrahana ny foto-drafitrasa voaomana, ny dobo manan-talenta ary ny tontolo iainana miadana izay tsy manohana fotsiny fa manampy amin'ny fitomboan'ny orinasam-peo, horonan-tsary, fahitalavitra ary mozika ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana. Ny valan-tseraseran'ny birao dia manome tombony ho an'ny tombontsoa azo avy amin'ny 100% nefa miaraka amin'ny [...]
Ny reniranon'i Dubai dia andrasana ho iray amin'ny rano lehibe indrindra sy ny fampandrosoana lehibe indrindra an'izao tontolo izao. Ny tetikasa dia ahitana lakandrano sy nosy artificielle ary hipoka ny farany farany avy any amoron-dranomasina Persian Gulf ao Dubai, emirate malaza indrindra any UAE. Ao amin'ny andiana faritra misy an'i Dubai Waterfront [...]
Ny tany Dubai dia mandrakotra faritra manodidina ny 10 metatra metatra toradroa. Voalaza fa iray amin'ny toerana tsara indrindra ho an'ny fialam-boly, fialamboly ary fizahan-tany ao Dubai. Dubailand no trano ho an'ny fisehoana voalohany sy miavaka. Noforonina tsara ilay izy izay misintona ny fizahan-tany lehibe indrindra manerana ny gender, sokajin-taona, [...]
Ny Dubai Biotechnology sy ny Fikarohana momba ny fikarohana dia ny lehibe sy ny tontolon'ny siansa momba ny fiainana ao Afovoany Atsinanana. Io no sehatry ny siansa sy orinasa voalohany izay natokana ho an'ny siansa manerantany. Ity dia Free Zone ary manome sehatra farany ho an'ny orinasa Life Science mba hametrahana [...]
Ny tranoben'i Emaar dia ivon-toeran'ny toeram-ponenana 16 izay namorona sombin-tsarimihetsika haingam-pandehanana. Manana toerana malalaka misy varavarankely lehibe ny trano fialan-tsasatra izay manome ny fahitana an'i Marina Beach sy Dubai Creek. Eo amin'ny valan-tseraseran'i Downtown Dubai any amin'ny faritr'i Rigga Al Buteen. Ny tetikasa dia mipetraka [...]
Emirates City dia ivon-toeram-ponenana sy trano fampiroboroboana izay natsangana tany Emirà ao Ajman. Ny fampandrosoana ny fiantohana dia hitoetra ao amin'ny Road Emirates izay dia 20 minitra mandeha fiara avy any amin'ireo seranam-piaramanidina ao Dubai sy Sharjah International. Izy io dia miorina tsara eo amin'ny Emirates Road Highway ary mamela ity tetikasa ity ho mifandray amin'ny [...]
Emirates Hills misy vondrom-piarahamonina mipetraka ao Dubai dia nantsoina hoe Beverly Hills. Iray amin'ireo fiarahamonina mendri-piderana sy mahazatra indrindra izy io izay manome ny mponina ao aminy ho fenitra ambony amin'ny fiainana miaraka amin'ny fomba nentim-paharazana. Dubai dia lazaina fa tranon'ireo mpandrindra fananganana trano fa ny Emirates Hills no [...]
Ny Falcon City of Wonders, fantatra amin'ny anarana hoe FalconCity, dia 100 acre (405 arivo metatra toradroa metatra) miorina ao Dubailand. Ny tetikasa AED 5.5 miliara (tetikasa US $ 1.5 miliara dolara) dia toerana malalaka, toeram-pitsangatsanganana, fialamboly ary toeram-pialam-boly misy trano, trano, trano fandraisam-bahiny, hotely, trano fisakafoanana, klioba ara-pahasalamana ary spa, sekoly sy zaridaina. [...]
Ny Green Community dia mandrakotra ny velaran-tany manodidina ny fito hektara enimpolo hekitara izay nohavaozina ary omena lanja lehibe sy trano izay mifanandrify ny ankamaroan'ny fanandramana sy ny paosy. Eo akaikin'ny The Views Dubai, ny Green Community East sy Green Community West dia manompo ny mponina ao aminy ho toy ny tena [...]
Ny Greens Dubai dia iray amin'ireo safidy tsara tsara ho an'ireo izay maniry ny mitady fampiononana sy ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny fomba mahavariana. Ny trano fandraisam-bahiny ao The Greens Dubai dia mora aloan'ny mpividy sy ny mpividy. Azo antoka fa manome fahafahana ireo izay mitady am-pilaminana sy [...]
IMPZ ny International Media Production Zone ao Dubai izay natokana sy natokana ho an'ny filan'ny indostrian'ny famokarana media manerantany. Tetik'asa fanarenana ny Governemanta Dubai eo ambany fiahian'ny orinasan'ny ray aman-dreny ny TECOM Investments. Izy io dia novolavolaina manerana ny faritry ny farihy misy farihy ao amin'ny faritra iray [...]
Ny tanàna iraisam-pirenena dia toerana iray ho an'ny toeram-piasana sy ny toekarena ara-kolontsaina ao Moyen-Orient sy ny faritra manodidina. Miely manerana ny hektara 800 izy io ary ny fampivoarana tsy manam-paharoa dia mampifangaro endrika mifangaro avy amin'ny sehatra ara-barotra, trano, varotra ary fizahan-tany avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ny anarana dia nomena satria misy karazana firenena [...]
Jebel Ali Free Zone dia faritra ara-toekarena malalaka hita any amin'ny faritr'i Jebel Ali any amin'ny farany andrefan'i Dubai, UAE akaikin'i Abu Dhabi. Toekarena Ekonomika Mondialy & rsquo; s sari-tany ary iray amin'ireo lehibe indrindra manerantany sy ireo faritra malalaka mitombo. Jafza dia niorina tamin'ny taona 1995 ary [...]
Jumeirah amin'ny tena izy dia midika hoe tsara. Toerana fitehirizana amoron-dranomasina ao Dubai, izay tena mampihoron-koditra ny trano fonenana tsy miankina. Ny fitantanana an'i Jumeirah dia voazarazara amin'ny ankapobeny ary indrindra indrindra amin'ny sehatra telo ary dia i Jumeirah 1, Jumeirah 2 ary Jumeirah 3. Ireo tetikasa telo ireo dia samy lafo ary koa [...]
Jumeirah Beach Residence dia fiarahamonina miavaka fantatra amin'ny anarana hoe orinasa orinasa ary ny toeram-pialan-tsasatry ny faritra no manome ny toeram-ponenana, mponina ary ny mpitsidika fialantsasatra manavatsava eo akaikin'ny moron-dranomasina miaraka amin'ny fiainana metropolitanina. Jumeirah Beach trano fonenana manerana ny vohikala momba ny 36 mahafinaritra Arabo sy Mediterane manana trano fonenana ary [...]
Jumeirah Golf Estates dia vondron'olona maro noforonina natsangana teo anivon'ny tontolon'ny zava-mahatalanjona iray ary tafiditra ao anatin'ny fiaraha-monina azo antoka. Manambatra ny fahafinaretan'ny fiainana maoderina mifangaro amin'ny tontolo voajanahary izany. Ny fahafahana miavaka amin'ny fiainana ao amin'ny faritra iray izay natao manokana mba hanomezana fahafaham-po ny fianakaviana rehetra [...]
Jumeirah heights dia trano fanorenana eo afovoan'i Dubai & amp; novolavolain'ny Nakheel Developments malaza. I Jumeirah heights dia trano misy ny Jumeirah Island sy ny Jumeirah Lake Towers. Namboarina io trano io raha jerena ny filana ny mpivady sy ny fianakaviany matihanina amin'ny fialam-boly rehetra sy ny ilàna azy. Jumeirah [...]
Ny Nosy Jumeirah dia faritra malaza ao Dubai izay misy fikambanana miavaka izay miparitaka manerana ny renirano lehibe sy ny rivo-mahery. Izy io dia vondron'ireo nosy 50 kely izay ahitana ny toeram-ponenana 46. Ny nosy sy ny farihy rehetra dia voavolavola ao anatiny. Misy 16 Jumeirah Villas [...]
Ny Jumeirah Lake Towers any Dubai dia iray amin'ireo vondron'olona manana trano sy komity. Mampiavaka ny farihy sy renirano lehibe izy io. Ny sasany amin'ireo farihy ireo dia ny Lake Alma West, Lake Alma Atsinanana, Lake Allure ary Elucio. Manana fampivoarana mahavariana manakaiky ny tanin'ny rano sy ny kilasy manerantany [...]
Iray amin'ireo trano fanatanjahan-tena manokana indrindra any Dubai ny Jumeirah Park. Eo akaikin'ny fivoaran-draharaha malaza toy ny Jumeirah Heights sy Jumeirah Islands. Ny tontolo iainana sy ny manodidina ny vondrom-piarahamonina dia sariaka ary tafiditra ao amin'ny Lush Green Parks sy ny fientanentanana mampihetsi-po, izay mahatonga azy ho tsara [...]
Ny Jumeirah Village Circle dia ao afovoan-tanànan'i New Dubai ary ny fampandrosoana dia natao hamolavola ny fiaraha-monina ary manana trano maoderina ao an-tanàna iray any amin'ny tanàna ambanivohitra milamina. Manome fomba fiaina mahasalama ihany koa izy ary ny vondrom-piarahamoniny dia manome ny karazana fanamorana rehetra ilaina mba hiaina fiainana [...]
& Nbsp; Ny Jumeirah Village Triangle dia mihoatra ny mihoatra ny 6000 trano fivoahana tsara tarehy izay napetraka ao anatinà tontolo maloton'ny fialamboly sy ny fanatontosana fialamboly sy fialam-boly ary manome fiainana traikefa mivelona ho an'ireo mponina ao aminy. Ny Jumeirah Village Triangle dia miala ny Sheikh Zayed Road ary ao akaikin'ny Jumeirah Island, Palm Jumeirah ary [...]
Lootah Real Estate Development & ndash; kolontsaina tsara, fientanam-po mba hahomby. Ny Lootah Group dia manana tantara mirehidrehitra miompy mihoatra ny dimy taona. Tamin'izany fotoana izany dia namela marika tsy hay karakarainy ny orinasa manerana ny orinasa maro samihafa izay ampiasainy. Anisan'izany ny engineering, ny banky, ny sakafo ary ny fanabeazana nomena fa [...]
Dubai Maritime City dia faritra maritime marobe. Iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny orinasan-tserasera Dubai. Mizotra mihoatra ny metimetatra metatra 2.27 ary mitahiry faritra dimy lehibe. Izy io koa dia sampana iraisam-pirenena ho an'ny orinasa sambo. Dubai Maritime City dia foibe iraisam-pirenena mahazatra izay manana [...]
Dubai Hills Estate dia fampiroboroboana fampiasa mampiavaka izay mampiavaka ny tanànan'i Mohammed Bin Rashid. Izany dia maneho ny fahitany ny fahatsaran-tarehin'i Dubai ho lasa tanàna manan-danja, anisan'ireo tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao mba hiaina, hiasa ary hivoatra. Mahery mafy amin'ny maha-olom-pirenena azy manokana, miaraka amin'i Merasa sy Emaar [...]
Maydan Avenue - ny fahaterahana fivoarana miavaka izay hitondra fiainana sy hery vaovao ho an'i Dubai. & Nbsp; Nipetraka teo akaikin'izao tontolo izao-novain'ny Meydan Racecourse sy ny The Meydan Hotel, ity fampivoarana marobe ity dia natao hanatsarana ny lova navelan'i Meydan amin'ny hetsika sy fifaninanana tsy mahazatra, ka manome safidy maro kokoa ho an'ny fiainana, fialam-boly sy fandraharahana. [...]
Ny tanànan'i Meydan dia iray amin'ireo toeram-pivarotana lehibe, toeram-pialam-boly, toekarena sy toekarena ao Dubai. Ny tanànan'i Meydan dia mifototra amin'ny toro lalana tsotra ho an'ny fiaraha-miasa, fiarahamonina ary fanatanjahan-tena. Ny teny hoe Meydan dia nalaina avy amin'ny teny Arabo izay midika hoe & lsquo; toerana fivoriana & rsquo; ary mitazona izany ao amin'ny filôzôfia ry zareo dia namorona sehatry ny tanàna mifangaro [...]
"Meydan One & quot; & Ndash; noheverina ho toy ny "Toerana ho an'ny tsirairay", dia toerana voalohany hiainana, milalao, mampiala voly, mihinana & amp; tsena. Mifototra amin'ny sehatry ny fivoaran'ny distrikan'i Meydan & rsquo; ny fivoaran'ny distrika 1 ary eo akaikin'ny Al Khail Road, ity tetikasa ity dia manome fahafaha-miditra marefo amin'ny alalan'ny karazam-pitaterana isan-karazany, rafitra fitateram-bahoaka sy anatiny. Miaraka amin'ny tany [...]
Mirdif dia iray amin'ireo faritra mipetraka ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Ny ankamaroany dia feno olona eoropeanina ary mifandray tsara amin'ny tanàna iray manontolo, anisan'izany ny distrikan'ny orinasa toy ny Business Bay, Wafi City ary Grand Hyatt. Izy io dia ahitana ireo vondrom-bavaka tsara tarehy, mampihetsi-po ary mahatsikaiky. [...]
Dubai Motor City dia fampiroboroboana ny trano any Dubai UAE an'ny Union Properties. Fomban-toerana iray natao ho an'ny velona sy miasa. Ny fampandrosoana ny tanàna iray ao an-tanàna dia mifototra amin'ny lohahevitry ny fanatanjahantena matihanina ary tafiditra ao anatin'izany ny trano fonenana, toeram-pandraharahana raharaham-barotra, toeram-piofanana maotera, fivarotana varotra ary toeram-ponenana. Manome [...]
Mudon izahay ho an'ny fiarahamonina miavaka izay natao ho an'ny olona manonofy fiaraha-monina mahasalama avy any ivelany. Ny fianakaviana izay te-hitsangana sy handeha dia hankafy ny zava-drehetra momba an'i Mudon, ary afaka manatsara ny fahasalamana sy ny fomba fiaina mavitrika manodidina ny ahi-maitso. Avy amin'ireo trano sy trano fisakafoanana malalaka mba hiarahaba ny valan-javaboary sy ny fialamboly mahafinaritra [...]
Nad Al Sheba dia iray amin'ireo distrika ao Dubai. Any atsimon'i Dubai Creek izy io. Notànan'i Al Markada, Bu Kadra sy Ras Al Khor any Indoneziana, ary Al Quoz any andrefana. Nad Al Sheba dia manana vondrom-piarahamonina efatra ahitana ny: Nad Al Sheba 1 - Nad Al Sheba [...]
Nad Al Hammar dia toerana iray ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra (UAE). Nad Al Hammar dia vondrom-piarahamonina kely sy trano ary indostrialy any atsinanan'i Dubai Creek. Ny sisin-tanin'i Ras Al Khor, atsimon'ny faritra indostrian'i Ras Al Khor, any atsinanan'i Al Warqaa sy avaratra amin'i Nad [...]
Ao amin'ny Old Town Dubai, ianao dia hitarika anao ho any amin'ny tontolo iray izay mandroso amin'ny paik'adiny fa mbola mitazona ny maha-fientanentanana ny miaina any amin'ny iray amin'ireo tanàn-dehibe indrindra manerana izao tontolo izao. Old Town Dubai dia fialantsasatra fohy tsy misy fetra izay hita any amin'ny iray amin'ireo [...]
Ny Palm Deira dia vondronosy artifisialy izay ampahany amin'ny Palm Trilogy. Tany am-piandohana dia nambara tamin'ny 2004 tamin'ny Oktobra ny drafitra hampandrosoana azy 8 in-droa lehibe noho ny Palm Jumeirah sy 5 avo indrindra noho ny Palm Jebel Ali. Natao ny hiantsena olona iray tapitrisa ary manodidina ny faritra iray [...]
Ny Palm Jebel Ali dia iray amin'ireo archipelagosin'ny taranaka ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Natomboka tamin'ny taona 2002 ary 50% lehibe noho ny Palm Jumeirah. Ny soso-kevitra dia hisy tranobe enina, kianja filalaovana rano, trano fonenan'ny ranomasina Village izay hatsangana eo ambonin'ny trano ambonin'ireo rano [...]
Palm Jumeirah dia lazaina ho vondronosy artificiel. Noforonin'i Nakheel Property izy io. Palm Jumeirah dia nizarazara ho sokajy maro izay ahitana Villas sy Apartments. Palm Jumeirah dia naorina teo amin'ny Hoalan'i Persa ary nipongatra hatramin'ny moron-dranomasin'i Dubai. Palm Jumeirah no nosy kely indrindra amin'ny trilogie niorina tamin'ny Persiana [...]
& Nbsp; Ny Pearl Jumeirah Island dia tany am-piandohan'ny sehatra 1 ho an'ny Meraas Development mba hampivelatra an'i Jumeirah Gardens City, tetikasa fampandrosoana miavaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo anelanelan'i Diyafa Street sy Al Safa Park ao amin'ny faritr'i Al Satwa ao Jumeirah. & Nbsp; Ity tetikasa ity dia nahitana ihany koa ny vondrona 7 lehilahy izay nanamboatra ny nosy [...]
Ras Al Khor dia toerana indostrialy any Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Midika ara-bakiteny hoe Cape of the Creek izany ary anisan'ny faritra indostria maromaro izay hita any amin'ny faritra ambanivohitr'i Dubai. Amin'ny ankapobeny, ny faritra indostrialy Ras Al Khor dia misy faritra telo lehibe ary izy ireo dia: Ras Al [...]
Ny vondrom-piarahamonin'ny Reem dia manolotra fandikan-teny maoderina momba ny hafanam-po mampitony ny Oase dezatra. Ny fivoaran'ny fonenana dia hanana vondrom-bahoakam-ponenana maro, izay hiseho amin'ny dingana. Efa namboarin'i Emaar trano fonenan'i Mira sy Mira Oasis ny fangatahana mafy orina. Ny mponina dia ho tonga any amin'ny faritra iray any ivelany, izay ahitana zavona botanical iray afa-tsy [...]
Reem dia fitaomam-panahy avy amin'ny zavakanto & rsquo; s palette, izy io dia mandrakotra ny sehatra indindra sy ny loko. Ny fambolena ny tany mandroso dia manjavona ny vondrom-piarahamonin'ny Reem izay malaindaina amin'ny fisehoana rano fisotro madio sy ny alikadia matevina. Voafintina izy io rehefa hody any amin'ny Oasis, Mankanesa any Reem. Reem dia fiaraha-monina mitoka-monina tokana izay [...]
Serena dia vondrom-piarahamonina miavona ao afovoan-tanànan'i Dubailand, akaikin'ny Emirates Road. Mandehana mitsidika ireo habakabaka maitso manerana ny vondrom-piarahamonina iray miaraka amin'ny rafitrano espaniola tokana. Manana fialantsasatra ao am-pon'ny fiarahamonina misy ny plaza Espaniola mitondra sehatra mahafinaritra ho an'ny mponina mihaona sy mankafy ny traikefa an-kalamanjana. Serena dia manolotra [...]
Ao Dubai, E 11 dia fantatra amin'ny anarana hoe Sheikh Zayed Road (amin'ny teny Arabo: & # 1588; & # 1575; & # 1585; & # 1593; ; & # 1575; & # 1604; & # 1588;). Ny làlambe dia miitatra amin'ny morontsiraka avy eo amin'ny Trade Center Roundabout mankany amin'ny sisintanin'i Abu Dhabi, 1610 kilometatra (1582 mi) any amin'ny faritr'i Jebel Ali. Ny lalana dia fantatra taloha tamin'ny hoe Road Defense. Eo anelanelan'ny [...]
Sobha City dia tetikasa fampandrosoana novolavolain'ny Sobha Group vao haingana. Izy io dia Indoneziana tompon'antoka ara-barotra izay napetraka tamin'ny taona 1995. Tetik'asa dolara isam-bolana izay ho eo akaikin'ny Park Meydan Godolphin sy ny Al Khali Road. Heverina ho iray [...]
TECOM dia ahitana ny tranonkala Dubai Internet, Dubai Media City sy Knowledge Village. Ny Free Zone dia tranokalan'ny orinasa maneran-tany an-jatony izay manompo teknolojia, media sy ny indostrian'ny fahalalàna. Ny sampan-draharaham-pitantanana tsy misy fepetra ary ny 100% tompon'ny orinasa dia roa amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ity faritra malalaka ity. Hanampy toerana mahomby ao amin'ny foibe [...]
Ny Hills no fiarahamonina fahadimy ao amin'ny faritra Emira-Living Living, izay misy tranobe an-jatony maro be sy ny tanàna ao an-tanàna, anisan'izany The Lakes, The Springs, The Meadows, ary Emirates Hills, izay tetikasa fonenana ao amin'ny Emaar Properties. Ny Hills no manome ny mponina fiainana feno hafanam-po ao am-pony [...]
Ny Lagoons dia fampandrosoana trano ao Dubai, Emirà Arabo Mitambatra. Izy io dia any amin'ny toerana tena lehibe indrindra eo amoron'ny reniranon'i Dubai. Ny distrikan'i Lagoon dia tsy manan-tsahala ary iray amin'ny tetikasa fampandrosoana fananana ara-barotra lehibe indrindra. Ny tanjon'ny fanorenana tetikasa toy izany dia ny hanamafy ny toerana misy an'i Dubai ho toy ny [...]
Ny Farihy dia iray amin'ireo trano fialamboly tsara tarehy izay vao haorina ao amin'ny faritra sy ny fialan-tsasatra ao Dubai. Mizarazara izy eo anivon'ireo vondrom-piarahamonina efatra izay manolotra trano tsara sy trano fialamboly hafa. Ny vondrom-piarahamonina efatra lehibe ao The Lakes Dubai dia: Deema Furat Maeen Zulal Ireo vondrom-piarahamonina efatra dia manana loka manokana [...]
Ny Meadows dia fanampin'ny vondrom-bala antsoina hoe Emirates velona. Iray amin'ireo tetikasam-pahaizana malaza ao Dubai izay mampiavaka ny fivoaran-draharaha tahaka ireo tao Greens, The Springs ary ny Nosy Jumeirah. Izy io dia manakaiky ny Emirates Hills fantatra amin'ny hoe Meadows Premium Villas. Ireo toeram-ponenana ireo [...]
Ny Springs ao Dubai dia vondrom-bahinin'ny tanàna sy trano fisakafoanana. Izy io dia tokantrano lavorary natsangana ho an'ny fianakaviana sy mpivady izay tonga miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana momba ny làlan-drano, tontolo lava sy zaridaina tsara tarehy. Ny tondra-drano dia miorina mafy amin'ny fomba toy izany fa manakaiky ny lalam-be rehetra izay manome [...]
Ny fomba fijery dia fikambanana manokana sy mahavariana izay miorina amin'ny làlana manan-danja sy be mpitia indrindra ao Dubai Sheikh Zayed Road. Manakaiky ny The Greens, Dubai Internet sy Media City. Ny oniversite samihafa, klioba golf maro ary trano fatoriana dimy sy trano fisakafoanana maro dia samy miely manerana ny [...]
Ny Nosy Eran-tany
Ny Nosy Erantany dia fanavaozana vaovao nataon'i Nakheel ary manome anao ny fampiasam-bola be indrindra ho an'ny nofinao. Ny World dia angonin'ny nosy 300 ary izy ireo dia miforona amin'ny endriky ny kontinanta ary any akaikin'ny moron-dranomasin'i Dubai. Nanaitra ny tany izy ary nanolotra ny [...]
Mametraka ao am-po ny "New Dubai", ny Town Square dia rakotra amina toerana malalaka, avy amin'ny varotra sy ny fialan-tsasatra ho an'ny fanatanjahantena sy ny fiarahamonina. Eritrereto akaiky io fiarahamonina vaovao io, noforonina ao an-tsaina miaraka amin'ny fiainana voalanjalanja. Ny fiainanao. Kianjan'ny Town dia miorina amin'ny fihaonan'ny Al Qudra Road [...]
Ny Umm Al Sheif dia voafaritra any avaratra amin'ny alàlan'ny Umm Suquiem, ary voafatotra amin'ny avaratra amin'ny lalana mankany Al Wasl Road ary mankany atsimo amin'ny làlana mankany amin'ny Sheikh Zayed Road. Toeram-ponenana mitobaka sy manana trano mivoatra sy trano fonenana ao Dubai ihany koa izany. Ny rafi-dalana eny an-toerana [...]
Umm Suqeim dia iray amin'ireo faritra ao Dubai. Any amin'ny faritra Andrefan'ny tanàna, eo akaikin'ny moron-dranomasin'ny Jumeirah Beach no misy azy io ary sisin-tany avaratr'i Jumeirah, any atsimo amin'i Al Sufouh, ary any Andrefan'i Al Safa, Al Manara sy Umm Al Sheif. [...]
Mpisava lalana tao am-pon'ireo tompon-dàlam-pandaminana nomanina ireo Emaar dia namorona faritra tsara tarehy sy mampatahotra hafa ao Warsan Estate izay miorina akaiky ny Emirates Road sy ny Mushrif Park. Izy io dia napetraka eo amin'ny faritra iray manodidina ny manodidina ny 3.4 tapitrisa metatra toradroa ary azo antoka fa manangona manodidina ny trano 500 Mediterranean trano fonenana. [...]
Ny tranoben'ny World Trade Center ao Dubai dia hita ao amin'ny Sheikh Zayed Road. Notokanana tamin'ny 1979, ny Trade Center Tower dia iray amin'ireo faritra avo indrindra ao amin'ny faritra. Ny tranobe dia misy ny tilikambo tany am-piandohana, efitrano fampirantiana valo, Centre Centre Convention Center any Dubai ary trano fonenana. Ny Foibe Trade Trade Dubai dia manana 39 etona maro [...]